China Inoraswa hutachiona sampling chubhu fekitori uye vagadziri | Limeng
Chinangwa uye tsananguro yehutachiona sampling kit
1. Iyo inoshandiswa kuunganidza uye kutakura kwecliniki furuwenza, avian furuwenza (senge H7N9), ruoko-tsoka-muromo hutachiona, gwirikwiti uye mamwe ma virus ehutachiona pamwe ne mycoplasma, ureaplasma uye chlamydia specimens
2. Hutachiona nemimwe mienzaniso inoenderana inochengetwa uye kutakurwa mukati memaawa makumi mana nemasere mufiriji (2-8 degrees).
3.Virusi uye dzakabatana masampuli akachengetwa pa -80 madhigirii kana mune emvura nitrogen kwenguva yakareba.
A) Kana iwo masampuli akaunganidzwa achishandiswa kutsvaga hutachiona hwenicic acid, nucleic acid yekubvisa kits uye nucleic acid yekuona reagents ichashandiswa; kana ikashandiswa pahutachiona kusurukirwa, masero etsika yepakati anofanirwa kushandiswa.
B) Minda yekushandisa yakasiyana ine zvido zvakasiyana pane yekukwirisa huwandu hwesampuli yemvura. Ndokumbira usarudze chigadzirwa chakakodzera zvinoenderana nemirairo mune yekuraira ruzivo:
Kune hutachiona sampling chubhu yekunhonga hutachiona masampuli kubva kuchipatara varwere, huwandu hwemvura inodikanwa inowanzo kuve 3.5ml kana 5ml.
Kune hutachiona sampling chubhu yekuunganidza uye pfupi-yenguva kutakura kweavian furuwenza hutachiona munzvimbo yekunze, huwandu hwemvura inodikanwa inowanzo kuve 5mL kana 6ml.
Chigadzirwa Chigadzirwa: Inoraswa hutachiona sampling chubhu
Kukura: 18mm * 100mm 50 / bhokisi vanhu vacho vanosanganisira chubhu * 1, chinjana * 1.
Virus sampling chubhu zvikamu zvikuru:
Hank's base base, gentamicin, fungal maantibioti, BSA (V), cryoprotectants, zvipenyu buffers uye amino acids.
Pahwaro hweHank's, kuwedzera BSA (boka rechishanu reBOVINE serum albumin), HEPES uye nezvimwe zvakagadzikana zvehutachiona zvinogona kuchengetedza chiitiko chehutachiona munzvimbo dzakasiyana siyana dzekupisa, kudzikisira kuwora kwehutachiona, uye kugadzirisa huwandu hwakanaka hwehutachiona hwega.
Kushandiswa kweVirus Sampling Kit
1. Usati watora sampuli, maka mucherechedzo weruzivo rwakakodzera pane zvakatemwa pabhodhoro resampuli.
2. Zvinoenderana nezvakasiyana sampling zvinodiwa, swab inoshandiswa kuenzanisa pane inoenderana saiti.
3. Kurumidza kuisa swab mutubu yekuenzanisira.
4. Bvarura chikamu chesufi pamusoro pesampuli chubhu uye simbisa chifukidziro chechubhu.
5. Zviratidzo zvemakiriniki zvichangobva kuunganidzwa zvinofanirwa kuendeswa kurabhoritari mukati memaawa makumi mana nemasere pa4 ° C, uye izvo zvinokundikana kuendeswa kurabhoritari mukati memaawa makumi mana nemasere zvinofanira kuchengetwa pa -70 ° C kana pazasi. Zviratidzo zvinofanirwa kuiswa jekiseni uye kupatsanurwa nekukurumidza sezvazvinogona mushure mekunge zvatumirwa ku laboratori. Izvo zvinogona kuiswa jekiseni uye zvakapatsanurwa mukati maawa makumi mana nemasere zvinogona kuchengetwa pa4 ℃ .Kana zvisina kubayiwa; inofanirwa kuchengetwa pa -70 ℃ kana pazasi.
Pharyngeal swab: Pukuta zvese pharyngeal toni uye yekumashure pharyngeal madziro ne swab, zvakare nyudza musoro we swab mune sampling solution, uye bvisa muswe. (Inokodzera sampling neichi chigadzirwa)
Pashure: Disposable kwakavharwa nenyama earloop bhendi
Blank Sampling Tube
Disposable zvakabudiswa Tube
Chiremba Blank Tube
Kurapa Sampling Tube